Brock Lesnar dia mampiseho endrika vaovao hafa amin'ny sary farany - Wwe
Brock Lesnar dia lavitra ny WWE hatramin'ny nandatsahany ny Tompondakan'ny WWE tany amin'i Drew McIntyre tao amin'ny WrestleMania 36. Na izany aza, Brock Lesnar dia nanova ny fijeriny tamina fotoana maromaro nandritra ny fiatoana.
Araka ny nambara tamin'ny sary navoakan'i castejack ao amin'ny Reddit , Brock Lesnar dia nahita sporting volombava an-tendrombohitra tamin'ny sary vaovao.
Azonao atao ny mijery ny sary etsy ambany:
Jery ​​vaovao volombava an'i Brock Lesnar.
Brock Lesnar's Status WWE
Tapitra ny volana aprily ny fifanarahana WWE an'i Brock Lesnar, ary rehefa mandeha ny fotoana dia maso ivoho malalaka i Brock Lesnar.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana farany tamin'i Ariel Helwani, dia nanambara i Paul Heyman fa mankafy ny fambolena sy ny maha akaiky ny fianakaviany i Brock Lesnar amin'izao fotoana izao. Nilaza i Heyman fa mankafy ny maha-ray i Lesnar ary tsy maika hiverina amin'ny peratra.
'Tia tantsaha i Brock Lesnar. Tena manao izany izy, ary mankafy fatratra ny maha-ray azy. Ary tsy zavatra izay noresahiny betsaka imasom-bahoaka, fa tena ray mahatalanjona ho an'ny zanany izy. Ary olona fianakaviana mahafinaritra ary tiany ny ho mpamboly. '
(Raha) mafy orina ny orinasa; Azoko antoka fa vonona hanao izany i Brock Lesnar: Paul Heyman
Paul Heyman, na izany aza, nanamarika ihany koa fa i Brock Lesnar dia hankafy tolotra tsara. Ilay Champion Universal teo aloha dia tia fanamby mendrika, ary ho vonona hiverina amin'ny hetsika izy raha misy drafitra manaitaitra tonga eo aminy.
Raha misy zavatra azon'ny WWE na ny tontolon'ny Sports Entertainment atolotra an'i Brock Lesnar izay manintona an'i Brock Lesnar, izay manentana an'i Brock Lesnar, izay mitaona an'i Brock Lesnar, dia afaka nijery i Brock Lesnar ary nilaza hoe: 'Maniry mafy ny hiatrika an'io fotoana io aho,' ary marina ny vola. Miorina mafy ny orinasa; Azoko antoka fa vonona hanao izany i Brock Lesnar. '
Tsy misy fanavaozana amin'izao fotoana izao momba ny drafitra WWE ho an'i Brock Lesnar. Ny finoana dia hanomboka hiresaka fifanarahana vaovao i Vince McMahon rehefa tonga ny fotoana hiverenan'i Brock Lesnar.
Na izany aza, tsy mbola naheno fandrosoana izahay teo amin'io lafiny io. Brock Lesnar dia toa faly tany amin'ny tanimboliny tany Saskatchewan, Canada, ary tokony hanana hevitra mazava momba ny satan'izy isika rehefa tonga i WrestleMania 37.
Miaraka amin'ny isa ambany indrindra an'ny WWE's RAW, mety ho alaim-panahy hamerina an'i Brock Lesnar ho amin'ny Royal Rumble ve ny orinasa? Te-hahita azy io ve ianao? Raha eny, iza no tokony hiatrika an'i Brock Lesnar amin'ny lalao miverina?
ohatra amin'ny famolavolana lasantsy amin'ny fifandraisana
ahoana no hilazana raha tsara tarehy ianao
ny vadiko tsy tia ahy fa tsy hiala
iza no mampiaraka drake amin'izao fotoana izao
milaza ny sakaiza tianao izy ireo